1500 koriori chikafu | Kudya kweNutri
Anenge munhu wese pane imwe nguva muhupenyu hwedu anga achida kudzikira huremu, zvichibva pane kurovedza muviri kana kudya Mune ino kesi, isu tinoda kukurudzira kudya kwe 1500 macalorie akakunakira iwe kuti uwane chinangwa chako.
Kudzora huremu ndeimwe yezviito zvekutanga zvatinofanira kuita kana tichinzwa kufufutirwa kana kuremerwa, kiyi chikafu chakaringana uye chakakwana. Kana iwe uchifarira, ramba uchiverenga iyi mitsara.
Kudya kwemazana mashanu emacalorie pazuva inzira yakanaka yekudzikisa huremu usina zvirevo zvakawandisa, saka zviri nyore kushandisa kuzuva redu nhasi. Hatimbofaniri kufungidzira pamusoro pehuremuTinofanirwa kuziva kuti huremu hwedu hunosanduka pazuva avhareji yemakirogiramu maviri kumusoro, maviri kilos pasi.
1 Matipi ekudzikisa huremu
2 1500 koriori chikafu
2.1 Yakakurudzirwa chikafu
3 Yakakurudzirwa huwandu
4 Zvikafu zvekudzivirira
5 Matipi ekuti uite
6 1.500 macalorie menyu
Kana isu tichikurudzira kudzikira huremu tinofanirwa kunyatsojekesa nezve zvinangwa zvedu, kuva nemoyo murefu, kugara uchitevedzera kudya kwatinosarudza. Kiyi yekuderedza uremu ndeye kudya mashoma macalorie kupfuura atinoshandisa, saka isu tinofanirwa kudzora kutora uye kuwedzera macalorie mari zvinoenderana nekurovedza muviri.
Parizvino, pane kudzora huremu kwemwedzi mitatu kuti tiwane muviri wedu wekurota, isu tinofanirwa kudzidza kushandura tsika dzekudya kuti tirege kuwira mukukanganisa kana maitiro akaipa. Chekutanga pane zvese, kuti usaise njodzi pahutano hwako, verenga muviri wako index index kuti uone kuti uri pachiyero chipi.
Kune rumwe rutivi, zvibvunze kuti mazuva mangani aunoita mitambo pavhiki, chikafu chakakangwa zvakadii, makabhohaidhiretsi kana chikafu chisina hutano chaunodya muvhiki.
Mukudya iwe haufanire "kutambura" isu tinofanirwa kuzvidzora asi hatifanirwe kutambura panguva yese yatiri kuitisa. Tinofanirwa kudya kubva kumapoka ese ezvikafu pasina chatinosiya, hatifanire kuisa pangozi hutano hwedu nekudzivisa kudya mafuta kana makabhohaidhiretsi
Tora imwe kudya kwakaringana panowanikwa mapoka ese ezvekudya, iwo huwandu hwakakodzera uye husingapfuure chero hwaro.
Zvibereko nemiriwo. Dzinofanirwa kuve chikafu chakanyanya kunyanya mukudya kwako. Tora zvikamu zvishanu pazuva, semuenzaniso, ndiro yakanaka yemiriwo yakakangwa, yakakangwa kana yakabikwa. Uye zvakare, suma miriwo yakaita saradhi nyowani uye zvidimbu zvemwaka nemichero yemhando kuti uve nesimba nemavhitamini.
tanga makabhohaidhiretsi kanokwana kamwe pazuva, senge mupunga, yakazara gorosi pasita, mbatatisi, kana chingwa. Zvakanaka, tora magiramu makumi matatu ehydrohydrate yaunoda.
Hatifaniri kudaro kanganwa kunwa mvura pasina zvinwiwa mukati mezuva, panguva yekudya uye nemamwe mazuva.
200 magiramu enyama isina mafuta. Iyo yakanaka ndeyekudya tsuro, huku, nyama yemhuka,
200 gramu ehove chena kana mazai.
60 magiramu emupunga wakasviba kana pasta yakazara yegorosi.
300 gramu embatatisi.
70 gramu emhando yetsanga.
400 magiramu emiriwo yakasungwa.
400 gramu yemichero mitsva.
Girazi remuto wechisikigo.
Tevere tinokuudza iwe kuti ndezvipi zvekudya izvo zvatinofanirwa kudzivirira, kudzoreredza chimiro uye kwete kuwira mune yakaipa tsika dzekudya.
Zvokudya zvine mafuta akawanda senge nyama yenguruve sausage, gwayana kana nyama yenguruve, mabhatiri, margarines, ane mafuta kana akaporeswa chizi.
Chikafu chakabikwa kare. Kunyangwe ivo vakanyatsogadzikana nekuti ivo vanongoda kudziirwa, ivo vakazara nemafuta, shuga, uye munyu wakawandisa. Kana isu tasarudza kuve neyakagadzirirwa dhishi, tarisa pakunyorwa kwayo kuitira kuti ive noutano sezvinobvira.
Usashandise zvisvinu zvakagadzirwa kana zvakagadzirwa. Usapedze masukisi zvichibva pamafuta, maoiri kana mabutiri. Zvakare, nzvenga ese ma vinaigrette ayo anotengeswa sechiedza kana mwenje nekuti haana hutanowo. Iyo yakanaka ndeyekunaka uye kushandisa ndimu nyowani kupfeka ndiro dzako.
Maindasitiri mafekitaIdzo chikafu chizere neshuga, mafuta akaguta, mafuta akachinjika, munyu, zvinodzivirira uye zvinhu zvakawanda zvisingadiwe kune muviri wakagwinya. Naizvozvo, usapedze makuki, mapeke, kana makeke akagadzirwa.
Zvinwiwa zvinotapira zvine shuga yakawedzerwa. Girazi rakajairwa nesoda yako yaunofarira inogona kukanganisa kudya kwako, dzivisa kunwa masoda ane mashuga asingabatsire zvachose.
Dzivisa kunwa doro. Ivo vanoita kuti tirere nekuda kwavo kwakanyanya huwandu hwemakirori asina chinhu.
Matipi ekuti uite
Usatadza kudya kwemangwanani. Icho ndicho chakakosha chikafu chezuva iri uye chinokupa iwe simba uye hauzonzwa sekumwa pakati pekudya.
Tsvaga muyero mukudya. Usadya zvakawanda uye udye zvishoma. Iwe unofanirwa kuzvigutsa pese pakudya asi nezvikafu zvine hutano.
Idya zvitatu zvikuru, masikati uye chikafu.
Idya zvese zvakagadzirwa nemukaka.
Tora michero zuva nezuva, gara uchisarudza mwaka nemasikirwo.
Mbeu dzese uye yakanakira kudya kwemangwanani.
Chengetedza huwandu hwemafuta waunotora pazuva, Iwe haufanire kudarika matatu mashupuni pazuva kana uchidya.
Inobatanidza chikafu chakapfuma makabhohaidhiretsi game miriwo y protein.
ari kudya kwemanheru dzinofanira kuva chiedza uye nenguva yokutanga.
Nguva dzose sanganisira muriwo pakudya.
Idya wakadzikama munzvimbo yakasununguka usina kunetseka kana kumhanya. Iwe unofanirwa kutora nguva yako, tora mukana wenguva uye unakirwe nechikafu.
Kuva pane chikafu hazvireve kufira, unofanira kunakidzwa nekukoshesa zvaunodya. Iwe unongofanirwa kudzora huwandu uye uye nzira dzavakabikwa nadzo.
Usakanganwa kuita kurovedza muviri. Izvo zvakakosha kwazvo kuti uchengetedze muviri uchishanda. Kanenge katatu pavhiki.
1.500 macalorie menyu
Mukombe wemukaka wakaomeswa, mukaka wemombe kana mukaka wemuriwo. Nekofi kana tii.
2 zvidimbu zvidiki zvechingwa chegorosi chakazara.
Chikamu che skimmed nyowani chizi uye
Chidimbu chemichero yemwaka.
Miriwo yakabikwa kana yakabikwa yakarungwa nepuniki yemafuta emuorivhi.
30 gramu emhando yetsanga.
Yakabikwa hove chena kana chechina chehuku yakakangwa.
Muriwo wemashizha uye miriwo miriwo, ine gaba reasiki tuna, maanchovies maviri uye ane mafuta mashoma.
Zvimedu zviviri zvechingwa kana kuwedzera magiramu makumi maviri nemashanu ezviyo.
1 kushumirwa kwemichero.
Kana iwe uri kutsvaga kudzikisa huremu nenzira yakachengeteka uye ine hutano, usazeze kuenda kuna endocrinologist kuti akutungamire iwe mukurema kwekutapudza maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » 1500 koriori chikafu